ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကို ကုလားလူမျိုးဟူ၍ပြောဆိုနေကြသူများ သတိထားပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါရန် – စှယျစုံသုတ
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကို ကုလားလူမျိုးဟူ၍ပြောဆိုနေကြသူများ သတိထားပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါရန်
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကို ကုလားလူမျိုးဟူ၍ပြောဆိုနေကြသူများ သတိထားပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါရန် ဤပို့စ်ကိုတင်ပေးလိုက်ရပါသည်l
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ကုလားလို့ပြောနေကြသူများအတွတ်….သူတို့ဟာ ကပိလဝတ်၊ ဒေဝဒဟ၊ ကောလိယ စတဲ့ သကာကီဝင်တွေရဲ့ သက္ကတိုင်းဟာ မျက်မှောက်ခေတ် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်း မဟုတ်ပဲ နီပေါနိုင်ငံမှာ ဆိုတာတောင် မသိပဲ ပြောဆိုနေကြတယ်။
သာကီဝင်မင်းသားက ဘုရားဖြစ်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓနဲ့ သာကီဝင်တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို သေခြာ မဖတ်ဘူးတော့ သူများပြောတာ ဟုတ်လိမ့်နိုးနိုး ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ (အဲသလို ဘူမသိ ကိုးမသိ သူများပြောတာ ဟုတ်လိမ့်နိုး ထင်နေရင် သူများ လိမ်ညာတာ ခံရနိုင်ပါတယ်)
ဗုဒ္ဓနှင့် သူ့ဆွေတော်မျိုးတော် သက္က ဆိုတဲ့ သာကီဝင် တွေရဲ့ သမိုင်းကတော့ . . .
၁။ သာကီဝင်တွေ ဖြစ်လာမယ့် ဥက္ကာကရာဇ်မင်းကြီးရဲ့ သားတော်လေးပါး၊ သမီးတော် ငါးပါး နဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါများဟာ မဇ္ဈိမဒေသသားများမဟုတ် (ယနေ့နီပေါနိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ်ဒေသ က ဒေသခံတွေမဟုတ်ပဲ) အလွန်ရှေးကျတဲ့ကာလက အလွန်ဝေးကွာတဲ့ဒေသမှ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူများ ဖြစ်တယ်။
၅။ နောက်တစ်ချက်က နောင် သာကီဝင်ဖြစ်လာမယ့် သူတွေဟာ “ကျွန်းတောကြီး ” တွေ ရှိတဲ့ အရပ်က လာကြတာပါတဲ့။ သူတို့ဟာ ဟိမဝန္တာတောင်ခြေကို ပတ်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းလာကြတာ ကျွန်းတောကြီးတွေ ရှိတဲ့ဒေသကို ရောက်တယ်။
ဇာတိမြေနဲ့ တူသမို့ တိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်ပြီး နေကြတယ်။ ကပိလ ရသေ့ကြီး ကလည်း မြို့တည်ဖို့ နေရာကို ပေးတယ်။ “သာကဝန=ကျွန်းတော” ကြီးမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံမို့ သာကပြည်လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။
၆။ ၁၉၅၈ အိန္ဒိယ ရှေးဟောင်းသုတေသနရဲ့ ကပိလဝတ်၊ ဒေဝဒဟ မြို့ဟောင်းများ တူးဖော်မှု အစီရင်ခံစာအရ သာကီဝင်တွေဟာ အနောက်ဘက်က ဝင်လာတဲ့ အာရိယံ တွေလုံးဝ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
သာကီဝင်တွေဟာ တိဘက်မြန်မာ ခေါ် တိဘက်တိုဘားမင်း အုပ်စုဝင်တွေ ဖြစ်ပါသတဲ့။ (သာကီဝင်တွေဟာ တိဘက်တိုဘားမင်း အုပ်စုဝင်ဖြစ်ကြောင်း အခြား အထောက်အထား များစွာ ရှိပေမယ့် စာရှည်လွန်းလို့ ဤမျှသာ)
၉။ ဘီစီ ၉၀၀ ခန့်က ကပိလဝတ်မှ အဘိရာဇာခေါင်းဆောင်တဲ့ သာကီဝင် အုပ်စု တစ်စုဟာ သူတို့ဇာတိဖြစ်တဲ့ သင်္ဃဿ (တကောင်း) ကို ပြန်လည် ရွှေ့ပြောင်းလာကြတယ်။ စစ်အင်အား ကြီးတဲ့ အာရိယံကုလားဖြူ မင်းက သမီးတောင်းတာ မပေးလို့၊ အင်အားခြင်းလည်း မယှဉ်နိုင်လို့ ဇာတိတကောင်းကို ပြန်ပြေးလာရခြင်းဖြစ်တယ်။ (ဒါကို သာကီဝင်တွေ ပထမအကြိမ် တကောင်းကို ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှု လို့ခေါ်တယ်)
ကိုင်းဒီတော့ မြန်မာတွေနဲ့ သွေးသားရင်း ဖြစ်တဲ့ သာကီဝင်မင်းသားကနေ ဘုရားဖြစ်သွားတဲ့ ဗုဒ္ဓဟာ မြန်မာတွေအတွက် သွေးရင်းသားရင်းပါ။ နိုင်ငံခြားသား မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓကို အိန္ဒိယသား ထင်မှတ်နေသူ မဟာပညာရှော်များကို ဗုဒ္ဓဟာ နီပေါနိုင်ငံ ကပိလဝတ်မြို့သား၊ မြန်မာ့သွေးသားရင့်း၊ သူ့ဘိုးဘေးများဟာ မြန်မာပြည်ဇာတိများ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အကိုးအကား။ ။ ဦးလှသိန်းထဋ် (ဘီအေ၊ ဓမ္မာစရိယ) ၏ ဗုဒ္ဓနှင့် မြန်မာလူမျိုးမင်းကွန်း ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ ရဲ့ မဟာဗုဒ္ဓဝင်များတောင်ပေါက်ဆရာတော်ရဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနိက ပဌဝီကျမ်းသိသာမြင်သာစေရန် နေဝါရီ သာကီဝင် နွယ်များ ဓာတ်ပုံဖြင့် ပြသလိုက်ပါသည်ရုပ်တွေက မြန်မာနဲ့ဆင်လားအိန္ဒိယနွယ်ဖွားနဲ့ဆင်လားကြည့်ခိုင်းလိုက် ….
ရုပ်တူတာတင်မက နေဝါရီဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကားနဲ့တူတာတွေအားကြီးပဲ ….ဂဏန်းသချာင်္ ၅=ငါး ကို ငါး လို့ပဲခေါ်တယ်
မီး ကို မီးပူတာကို ပူတာထိတာကို ထိတာမီးပူဆိုတာကို မီးပူနောက်မေးခွန်းမှန်သမျှ လား ပါတယ်
အငြင်းဝါကျမှန်သမျှ အရှေ့မှာ`မ´ ထည့်ပြီးပြောတယ်အာလူး ကို အာလူး ပဲခေါ်တယ် ၀ရံတာ ကို ၀ရံတာ လို့ပဲခေါ်တယ် ရေထဲ က ငါး ကို လည်း ငါး လို့ပဲ ခေါ်တယ် နေ၀ါရီ လူမျိူးနှင့် မြန်မာလူမျိူးတ်ို့တူသောနောက်ထပ်စကားချို့ရှိပါသေးတယ်…
လမ်း ကို လမ်း သွားသည်ကို လျှောက် ။
မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်သူဆည်းကပ်သူအများစုဟာမျက်နှာဝိုင်းမျိူးများဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လူမျိူးကြီးများဖြစ်တဲ့ရာဝေရီယာန် မွန်ဂိုလီယာန် အင်ဒိုအာရီယာန်စတဲုံ့သုံးမျိူးအနက်ထဲက အင်ဒိုအာရီယာန်ကုလားလူမျိူးမဟုတ်တာသေချာတယ်…။
ကျန်တဲ့စကား လုံး အသုံး အနှုန်း တွေ တူတာ တွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ် နီပေါနိုင်ငံမှာ နေပါလီ လူမျိုးနဲ့ နေဝါရီ လူမျိုးဆိုပြီးလူမျိုး ၂ မျိုးရှိတယ်နေပါလီ က ပုဏ္ဏား ဗြဟ္မာဏ မျိုးဖြစ်ပြီးနေဝါရီ လူမျိုးက သာကီဝင် မျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုပြထားတဲ့ပုံက နေဝါရီ မိန်းကလေးတွေပုံပါ
နေဝါရီ လူမျိုးအုပ်စုသည် တိဘက်တိုဘားမန်း အုပ်စုဖြစ်ပါသည်ကုလား မျိုး အာရီယာန် နွယ်မဟုတ်ပါသိသာမြင်သာစေရန် ဓာတ်ပုံ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Copy ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောင်စိုးဦး
“ဘာသာ ၊သာသနာကို ရုပျဆိုးအကညျြးတနျစတေဲ့ အလှူခံတခြို့အကွောငျး ပါခြုပျဆရာတျောကွီးရဲ့ မိနျ့ကွားခကျြ”